सक्षम व्यक्तिको आवश्यकता | Epradesh Today
Homeफिचरसक्षम व्यक्तिको आवश्यकता
सक्षम व्यक्तिको आवश्यकता
नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. ५
क्षेत्र नम्बर ३ को (२) नेपाली कांग्रेस
सरकारले आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै चुनावी माहोल तातिन थालेको छ । आफूलाई सक्षम मान्ने नेतृत्वहरु उमेदवारको टिकट पाउन पार्टीभित्र लाग्नुभएको छ भने कार्यकर्ताहरु आफ्नो दलका चुनावी एजेन्डा लिएर गाउँमा जान थालिसकेका छन् ।
रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुने भएपछि फेरी नागरिकले पनि आफ्नो अमुल्य मत दिनका लागि कुन पार्टी र कुन उमेदवार छान्ने भन्नेमा चिया पसलदेखि सहर बजारसम्म चर्चा चलिसकेको छ ।
दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (२) मा खासगरी प्रदेश सभा सदस्य उत्तरकुमार ओलीलाई हामीहरुले गुमाइसकेपछि नेतृत्वविहीन बनेको यो क्षेत्रमा फेरि निर्वाचन हुन लागेकोमा जनतामा एउटा छुट्टै आशा र अपेक्षा पलाएको छ ।
अब अहिले हाम्रो पार्टीभित्र पनि कसलाई उमेदवार छनौट गर्ने भन्ने बहस र चर्चा चलिसकेको छ । यसको बारेमा नेतृत्वले सही निर्णय गर्ला भन्नेमा आशावादी देखिएका छौँ । आकांक्षी देखिनुभएका सबैका विचार सम्बोधन हुने गरी साझा उमेदवार छनौट हुनेछ ।
पार्टीले छानेको साझा उमेदवारलाई सबै मिलेर मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने सँगसँगै यो क्षेत्रको परिवर्तनका लागि उहाँलाई सक्रिय बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी चुनाव जित्नुमात्र ठूलो कुरा होइन् ।
भोलि चुनाव जितिसकेपछि जनताका समस्या निष्पक्ष ढंगले समाधान गर्ने नै सक्षम नेतृत्व हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चुनाव हुनु स्वभाविक प्रक्रिया हो तर चुनावमा जित हार त हुन्छ । चुनावी मत परिणामा आफ्नो पक्षमा पारिसेपछि विपक्ष दलमा भोट हाल्ने जनताका माग पनि समाधान गर्न सक्नु नै एउटा असल नेतृत्व हो ।
त्यस्ता उमेदवारको पर्खाइमा छ हाम्रो क्षेत्र । विशेषगरी म सम्वद्ध पार्टीले पनि यस्ता कुरामा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ । हामीले पार्टीभित्र राख्दै आएको कुरा पनि हो । उमेदवार छनौटमै विवाद नहोस् ।
‘भाइ फुटे गवाँर लुटे’ भन्ने भनेजस्तै पार्टीभित्र देखिएको असमझदारीले तेस्रो पक्षले फाइदा लुट्ने निश्चित देखिन्छ । त्यसैले पार्टीले उमेदवार छनौट गर्दा बडो गम्भीर र सुक्ष्म ढंगले छनौट गर्नुपर्छ र पार्टीभित्र देखिएका समस्यालाई छताछुल्ल अवस्थामा ल्याउन दिनुहुँदैन् ।
विगतको अभ्यासबाट पनि पार्टीले पाठ सिक्नुपर्छ । जे जस्तो भएपनि हाम्रो क्षेत्रले सक्षम र असल नेतृत्व पाउने छौँ भन्ने पूर्ण आशामा हामीहरु छौँ । देखिएका तिक्ततालाई पार्टीभित्रै छलफल र समाधान गर्नुपर्छ र जनताको मन जित्ने उमेदवार छनौट हुनुपर्छ ।
ओलीका अपूरा काम पूरा गर्ने
श्रीमती (स्व. उत्तरकुमार वली)
आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचनको मिति तय गरेसँगै चुनावको तयारीमा दलहरुले अहिले उमेदवार छनौटको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । दाङको क्षेत्र नम्बर ३ (२) मा खासगरी प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओलीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि अभिभावकविहीन भएका छन् नागरिक ।
अभिभावक गुमाएका पश्चिम दाङका नागरिकलाई अबको उपनिर्वाचनले सक्षम, दक्ष र उहाँजस्तै जनताको मन जित्ने उमेदवार दिनुपर्छ । अहिले खासगरी नेकपा र नेपाली कांग्रेसले उमेदवार छनौट प्रक्रियामा आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । नेकपामा पनि उमेदवार छनौटका लागि सामान्य रुपमा छलफल हुने गरेको छ ।
अहिले ठ्याक्कै यहि भन्न सकिने अवस्था छैन् । जेहोस् दलहरुले उमेदवार छनौटमा राम्रो, उत्तरकुमार ओलीका सपनालाई पूरा गर्नसक्ने नेतृत्वलाई छनौट गर्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ ।
अब आउने नयाँ नेतृत्वले स्वर्गीय उत्तरकुमार ओलीले गरेका अपूरा कामलाई पूर्णता दिनुका साथै नयाँ उदाहरणीय कामहरु गर्न आवश्यक छ । पश्चिम दाङमा अपेक्षाकृत विकास हुन सकिरहेको छैन् ।
उत्तरकुमार ओलीलाई जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेर आफ्नो अमूल्य मत दिनुभएको थियो तर नियतिले आज उहाँ नरहे पनि उहाँले थालेका कामलाई पूरा गर्न ममा पनि दायित्व आएको छ ।
मैले पनि यस क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको छ । नेकपा खास गरी दुई ठूला दल एक भइसकेको अवस्थामा तल्लो तहसम्म पनि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि अहिले जनतामा फेरी अर्को आशा पलाएको छ ।
नागरिकले चाहेका अपेक्षा र देखेका सपना पूरा गर्न अर्को नेतृत्वमा आइपरेको छ । जनताका थुप्रै आशालाई पूरा गर्नुछ त्यसैले पार्टी नेतृत्वले उमेदवार छनौटमा दक्ष र सक्षम उमेदवार छनौट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।
म पनि खासै राजनीतिमा लागेको छैन् तर पनि जनताले मलाई तपाईको श्रीमानका सपना पूरा गर्नुपर्छ भनेर साथ र हौसला प्रदान गर्नुभएको छ ।
राजनैतिक आस्थाका रुपमा फरक व्यवहार गर्ने नेतृत्व भन्दा पनि सबैलाई समान दृष्टिले कामहरु सम्पन्न गरिदिने नेतृत्व गर्नु नै आजको आवश्यकता छ ।
पार्टीभित्र पनि आकांक्षा धेरैको हुनसक्छ तर सबैका विचारलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेतृत्व आउनुपर्छ । पार्टीभित्र देखिएका सानातिना समस्यालाई पार्टीभित्रै छलफल र बहसबाट समाधान गर्न सक्यो भने पनि राम्रो सन्देश जान्छ ।
अहिलेसम्म पार्टीभित्र कुनै मत भिन्नता पनि देखिएको छैन् । म त भन्छु नेतृत्व जोसुकै आएपनि जनतालाई महशुस हुने गरी काम गर्नुपर्छ । जनताका समस्यालाई आफ्नै ठानेर जतिसक्दो छिटो समाधान गर्ने नेतृत्वलाई जनताले सहजै मत दिन तयार छन् । जनताका सपनालाई पूरा गर्ने कुरामा मेरो पनि पूर्णतया समर्थन रहने छ ।